Falastiiniyiinta oo Cristiano Ronaldo u doortay Shaqsiga sanadka 2016 – Gool FM
Falastiiniyiinta oo Cristiano Ronaldo u doortay Shaqsiga sanadka 2016
(Jerusalem), 31 Okt 2016 –Ururka Taageerayaasha Real Madrid ee Waddanka Falastiin ayaa xidigga Real Madrid u magacaabay Shaqsiga Sanadka 2016 ee Falastiin, taasoo uu ku muteystay sida uu caawiyay Carruurta Falastiiniyiinta iyo guud ahaan Carruurta Caalamka.
Kal hore ayay ahayd markii Laacibka Portugal, CR7 uu marti geliyay wiil yar oo lagu magacaabo Ahmed Al Dawaabishah oo ahaa midka keliya ee ka bad baaday qoyskiisa oo kulligood lagu xasuuqay Koonfurta Nablus, iyadoo wiilkaasi 5 sano jirka ah uu aad ugu farxay markii uu la kulmay laacibka uu xiiseeyo.
Khalid Shoman oo ah Guddoomiyaha Ururka Taageerayaasha Falastiiniyiinta ayaa uga mahad celiyay Ronaldo sida ballaaran ee uu dhowr jeer kaalmo u soo gaarsiiyay carruurta Falastiiniyiinta, isagoo xusay in uu u qalmo abaalmarintan ay Reer Falastiin u magacaabeen.
Khalid waxa uu caddeeyay in kooxda Real Madrid ay tahay naadiga keliya ee ay aadka ula dhacsan yihiin isla markaana u qadariyaan Falastiiniyiintu.
Xaflad gaar ah oo lagu bixin doono abaalmarinta shaqsiga sanadka 2016 ee Falastiin ayaa waxaa 16 bisha December lagu qaban doonaa gudaha dalkaasi, waxaana ka soo qayb geli doona 1200 oo shaqsiyaad ah oo dunida ka kala socda, balse Ronaldo ayaan madashaasi iman karin maadaama uu waqtigaasi ka qayb galayo ciyaarta Real Madrid ee Koobka Naadiyada Caalamka.
https://t.co/LsnAppNr0x آخر الاخبار الرياضية: رونالدو “رجل العام 2016” في فلسطين https://t.co/CzkaLyEhvd
— SportSpiritKw (@Sportspirit_kw) October 31, 2016
Man United oo xalay qabatay cashadeeda sanadlaha ee sadaqo ururinta…(SAWIRRO)